Nahemotra amin’ny fotoana manaraka tsy voafaritra - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ketrika sy Kandra
Nahemotra amin’ny fotoana manaraka tsy voafaritra
Rasolonjatovo Willy il y a 30 jours
Nahemotra amin’ny fotoana manaraka mahamety azy ny hetsika Ketrika sy Kandra noho ny antony fandaminana. Betsaka ireo mpiara miombon’antoka no tsy afaka, raikitra amin’ny zavatra hafa. Izany no nambaran’ireo tompon’andraikitra nandritra ny resaka nifanaovan’izy ireo tamin’ny mpanao gazety teny Tsaralalàna ny alarobia 27 oktobra.
Raha tsiahivina dia hetsika maimaim-poana nokasaina hatao mandritra ny telo andro eny Ampefiloha, ho an'ireo rehetra izay liana te hiditra amin'ny sehatry ny asa (asa tena na asa amin'ny orinasa).
Hahitana tranoheva mampiseho ireo karazana asa sy sehatrasa isan-karazany.
Test d'orientation ahafantarana ny asa mifanaraka amin’ny tena. Ahitana torohevitra mikasika ny fiomanana amin'ny fidirana amin'ny sehatry ny asa ihany koa (fahaiza-manao ilaina, fananana fahatokisan-tena sy fahavononana ary fahasahiana hanomboka ny asa sy ny fandraharahana tiana atao. Manampy amin’ny fandraisana fanampahan-kevitra alohan’ny hidirana amin’ny asa.
Ahitana fampiharana asa, toy ny zaitra, mofomamy asa tanana…
Isan’ny mampiavaka ity hetsika ity ny fisian’ny tranoheva manokana ahafahan’ireo mpitsidika mahafantatra bebe kokoa ny mombamomba ny tenany (profil) sy ny sehatr’asa mifanaraka aminy amin’ny alalàn’ny fitsapana kely. Hisy ihany koa tranoheva hampiseho ireo karazana asa sy sehatr’asa maro toy ny taovolo sy tarehy, asa tanana, sakafo sy mofomamy, fanamboarana sy fikojakojana fiara sy ny maro hafa izay mahaliana ny tanora amin’izao fotoana. Ankehitriny dia maro ireo call center izay tanora no mameno azy.
Teo am-pamaranana dia nanambara ireo mpikarakara fa tsy hihemotra lavitra ny hanatontosana ny hetsika fa amin’ity taona ity ihany. Miandry ny fotoana izany ireo mpanjifa.